15:21, 28 July 2014
War ku saabsan ilmo iska soo rididda
Waxaan bixinnay war ku saabsan ilmo iska soo rididda kaasoo loogu talogalay haweenka uusan Ingiriisku luqaddooda koowaad ahayn. Waxaan xarumaheenna oo dhan ku aragnaa haween fara badan oo ah kuwo deggan UK iyo kuwo aan degganeyn UK isla markaana kooxdeenna shaqaaluhu waxay halkaas u joogaan iney intii karaankooda ah ugu deeqaan taageero iyo caawino. Wax ku saabsan Bukaan Socod Eegtooyinka Marie Stopes
Hay’adda Marie Stopes International waxay 9 bukaan socod eegtooyin ku leedahay UK waxayna caawino siisaa haweenka doonaya in ay ilmo iska soo ridid sameeyaan. Waxaan nahay kuwo aad khibrad u leh isla markaana takhaatiirteenna iyo kalkaalisooyinkeennu waa khubaro. Waxaan bixinnaa saddex meelood hal meel dhammaan adeegyada ilmo iska soo rididda ka jira UK sanad kasta. Waxaan sameyn doonnaa wax kasta oo aan awoodno si aan kuu daryeelno aanna booqashadaada bukaan socod eegtadeenna uga dhigno mid raaxo leh. Caawino helid haddii aad u maleyneysid in aad uur leedahay
Haddii aad ogaatid in aad uur leedahay aadna ku fekereysid ilmo iska soo ridid halkaan waxaa ku qoran waxoogaa war ah oo ku saabsan adeegyada aan ka bixinno Xarumaha Marie Stopes Centres. Halkaas waxaan u joognaa in aan ku caawinno isla markaana wax kasta waxaa loo sameynayaa si qarsoodi leh.
Si aad u xaqiijisid in aad uur leedahay same hubin uur. Waxaad mid ka soo iibsan kartaa farmashiyaha, suuqa weyn ama waxaad isaga soo hubin kartaa bukaan socod eegto xaddidid qoys oo xaafadda ku taalla.
Haddii aad jeceshahay in aad ballan la dhigatid hay’adda Marie Stopes International si aad ugala hadashid ilmo iska soo ridid, naga soo wac +44 (0)845 300 8090. Adeeggeenna wararku wuxuu furan yahay 24 saacadood, 7 maalmood toddobaadkiiba. Markaad telefoon noo soo dirtid, waxaan ku siin doonnaa taariikh iyo waqti aad xarunta ku timaaddid waxaanna kuu sheegi doonnaa meesha ay tahay in aad aaddo. Fadlan isku day oo keenso qof aad ku aammin qabto oo ku hadla Ingiriiska si uu kaaga caawiyo wicitaanka telefoonka haddii aad u baahato. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in aad u baahatid caawino markaad imaaneyso ballanta aad la leedahay Xarunta Marie Stopes, maadaama aannaan kuu ballan qaadi karin qof meesha kaaga turjuma.
Waxaad dooran kartaa in aad timaaddid oo la tashi iyo daaweyn ilmo iska soo ridid aad hal maalin ama labo maalmood oo kala tagsan aad ku sameysid haddii aad dooneysid. La talin ayaa sidoo kale la helayaa haddii aadan hubin wax aad sameyso. Fadlan nala socodsii haddii aad jeceshahay in marka hore lagula taliyo maadaama turjumaan uu lagama maarmaan noqon doono.
Haddii aad si gaar ah u imaaneyso waxaa jiri doona lacag lagaaga qaadayo –fadlan eeg qaybta lacagaha Marie Stopes si aad u heshid war dheeraad ah oo ku saabsan qiimayowgeenna loogu talogalay ilmo iska soo rididda. Si ka duwan haddii aad tahay qof deggan UK aadna u qalantid daaweynta NHS waxaad aadi kartaa bukaan socod eegto xaddidid qoys ama GP-gaaga ayaa laga yaabaa in uu awoodo in uu kuu diro adeegyada NHS ee ilmo iska soo rididda bilaashka ah.
Waxaad xarunta Marie Stopes ilmo iska soo rididda u joogeysaa oo keliya dhowr saacadood, ilaa maalin haddii uu uurkaagu yahay 19-24 toddbaad. Haddii aad meel fog u safreysid waxaan kugula talin lahayn in aad hal habeen hoteel joogtid ama meel la seexdo oo laga quraacdo daaweyntaada ka dib ka hor inta aadan guriga aadin. Kooxdeennu way kaa caawin karaan haddii aad u baahan tahay in aad ogaatid wixii faahfaahin ah oo tan ku saabsan adigoo soo wacaya +44 (0)845 300 80 90.
Markaad timaaddo xarunta Marie Stopes marka ugu horreysa waxaad arkaysaa takhtar ama kalkaaliso kula hadli doona si ay u xaqiijiyaan in aad go’aan ku soo gaartay ilmo iska soo rididda. Waxay hubin doonaan taariikhdaada caafimaad, caafimaadkaaga guud, waxay wax kaa weydiin doonaan wixii daawooyin ah ee aad qaadatid waxayna kaala hadli doonaan daawada uurka ka hortagta. Dhowr baaritaan ayaa lagugu sameyn doonaa inta aad xarunta joogtid – dhiig fartaada laga qaado ama sambal dhiig, sawir lagu hubinayo inta toddobaad ee aad uurka lahayd iyo cadaadiska dhiiggaaga ayaa la cabbirayaa. Waxaan sidoo kale ku talineynaa in haweenka oo dhan ay iska soo baaraan jeermiska Chlamydia daaweynta ka hor. Waxaan sidoo kale kuu sharrixi doonnaa kala doorashooyinka daaweynta Ilmo iska soo rididda. Takhtarkeennu wuxuu u baahan doonaa in uu buuxiyo foom rasmi ah ee ilmo iska soo ridid waxaanna u baahan doonnaa in aan helno saxiixaaga si aad u muujisid in aad oggoshahay in lagu daaweeyo.
Kala doorashooyinka daaweynta ilmo iska soo rididda
Xarumaha Marie Stopes waxay ku deeqaan labo nooc oo hawlo Ilmo iska soo ridid ah:
Ilmo isaga soo rididda daawada ama ilmo isaga soo rididda kaniiniga (ilaa 9 toddobaad ee uurka)
Habkaan ilmo iska soo rididda waxaa lagaaga baahan yahay in uurkaagu ka yar yahay 9 toddobaad. Wuxuu ku saabsan yahay qaadashada kaniiniyo waxaana lagaaga baahan yahay in aad labo booqasho ku timaaddo Xarunta Marie Stopes oo ay u dhexeeyaan 24 - 48 saacadood. Si markaas aad waddanka u joogtid 2-3 maalmood inta ay daaweyntaan kuu socoto.
Waxaan hubin doonnaa in aysan jirin sabab caafimaad oo aadan habkaan daaweynta ah u qaadan karin. Booqashaada koowaad waxaa lagu siin doonaa hal kaniini iyo afar kaniini oo lagu siin doono booqashaada labaad. Kaniiniyadaan waxay keeni doonaan in uu ilmuhu soo dhaco iyagoo joojinaya sii socoshada uurka waxayna keenayaan in ilmo galeenku uu uurka dibedda u soo tuuro. Waa in aad kaniiniyada oo dhan wada qaadatid. Waxaad la kulmi doontaa dhiigbax culus iyo casiraad waxaana laga yaabaa in aad dareento lalabbo wuxuuna uurku kaaga soo dhammaanayaa muddo 4 saacadood gudahooda ah marka aad kaniiniyada ugu danbeeya qaadato. Mararka qaarkood tani waxay noqon kartaa maalin ama labo markaad kaniiniyada qaadato ka dib isla markaana dhiigbaxa qaarkiis waxaa laga yaabaa in uu sii socdo dhowr toddobaad.
Ilmo isaga soo rididda qalliinka (ilaa 24 toddobaad ee uurka)
Waxaan awoodnaa in aan bixinno ilmo iska soo ridid qalliin ah ee uurka ilaa iyo 24 toddobaadka ah. Daaweyntaan isla marka lagu daaweeyo gurigaaga ayaad si toos ah u aadi kartaa daaweynta ka dib. Ilmo iska soo rididda qalliinka waxaa la isticmaalaa soo nuugid tartiib ah si uurka looga soo saaro ilmo galeenka. Tani waxay qaadataa qiyaastii 5-10 daqiiqadood waxaana lagaaga baahan doonaa in aad waqti gaaban ku qaadato bukaan socod eegtada markaas ka dib si loo xaqiijiyo in aad fiican tahay oo wacan tahay ka hor inta aadan guriga aadin. ilmo iska soo rididda taas ka danbeysa waxaa lagaaga baahan doonaa in aad xarunta waqti dheer joogtid.
Habkaan waxaad ku kala dooran kartaa saddex suuxin oo kala duwan: Adigoo si buuxda u soo jeeda muddada daweyntu socoto Adigoo hurdoonaya oo dawakhsan laakiin soo jeeda, oo ay kuula jirto durriin yar oo loo yaqaanno suuxinta aad dhimirka leedahay Waxaan sidoo kale ku deeqnaa suuxin guud halkaasoo aad si buuxda u hurudeysid –ilmo iska soo ridid kale oo danbe mar walba waxay noqon doontaa suuxin guud. Halista ay leedahay ilmo iska soo rididdu
Inkastoo ilmo iska soo rididdu ay tahay hawl aad ammaan u ah haddana waxaa jira xoogaa haliso ah oo ay tahay in aad la socoto, kuwaas waxaa ka mid ah haliso yar oo dhanka jeermiska ah, si socoshada uurka, ilmo iska soo rididda oo aan dhammeystirmin iyo xaalado aad dhif u ah ee waxyeello ku timaadda ilmo galeenka. Waan kaala hadli doonnaa kuwaan marka aad la tashiga nala sameyneysid. Maalinta lagu daaweynayo Waa in aadan cunto soo cunin, waxna soo cabbin, xataa biyo ama aadan sigaar soo cabbin ilaa 6 saacadood oo ballanta daaweyntaada ka horreysa. Lammaanahaaga/saaxiib/qaraabo waa iney ku keenaan ballanta daaweyntaada laakiin ma awoodi doonaan in ay joogaan marka hawsha lagaa qabanayo. Waxaa la siin doonaa waqti ay ku soo noqon karaan si ay guriga kuugu qaadaan. Qallinkaaga daaweynta ka dib waxaa jiri doona waqti aad ku nasaneyso waxaanna xaqiijin doonnaa in aad si kugu filan u wanaagsan oo aad tagi kareysid.
Ilmo iska soo rididda ka dib
Marka aad guriga aaddid
Waxaan ku siin doonnaa sharraxaadaha daryeelka ka dib oo buuxa ee ku saabsan sida aad isu xannaaneyneyso markaad guriga aaddo. Waxaa jira khad 24 saac ah oo caawin iyo talobixin ah ee daryeelka ka dib kaasoo ah 0845 300 8090.
Waxaan kugula talineynaa in aad nasato ugu yaraan 24 saacadood. Waad maydhan kartaa maalinta ku xigta hawsha; waxaan kugula talineynaa in aadan qabeysan ama aadan dabbaalan ilaa hal toddobaad, hana isticmaalin waxyaabaha leh barafuummada ilaa uu dhiigbaxu kaa istaago. Waa in aad ka fogaatid shaqo guri oo culus ama shaqo xoog u baahan, maadaama laga yaabo in ay taasi kuu keento dhiigbax iyo xanuun. Haddii shaqadaadu ay tahay mid xoog u baahan waa in aad dhowr maalmood oo kale fasax qaadataa. Kelyentiyada oo dhan xoogaa dhiigbax ah ayey leeyihiin marka ilmo iska soo rididda lagu sameeyo ka dib taasna waxaa laga yaabaa in ay ilaa waqti sii socoto. Adeeggeenna daryeelka ka dib ee 24 saac ah wuxuu ku deeqayaa dhammaan caawinada iyo talada aad u baahan tahay ilmo iska soo rididda ka dib waxaanna awoodnaa in aan ku deeqno hubin daaweynta ka dib oo lagu sameeyo bukaan socod eegtada haddii ay jiraan wax ku welwel gelinaya. Haddii aad u baahan tahay in aad soo wacdo khadkeenna caawinta fadlan xaqiiji in aad haysato saaxiib Ingiriiska ku hadla.
Xanuun baabi’iye qaadasho
Fadlan xaqiiji in aad guriga ku haysato xanuun baai’iye; waxaan ku talineynaa Paracetamol iyo Ibuprofen (Ibuprofen qaado oo keliya haddii aad hubto in aad qaadan karto). Ha qaadan waxyaabaha ka sameysan Aspirin
Is xannaaneynta ilmo iska soo rididda ka dib
Tani waa halis aad u yar ee caafimaadkaaga ama awoodda rimidda ee mustaqbalka marka aad marto ilmo iska soo ridid daawo ama qalliin ah; laakiin si hoos loogu dhigo halista jeermiska isticmaal oo keliya faashado ee ha isticmaalin suufka caadada ama tambooni ilaa caadada ku xigta ay kuu timaaddo. Wax galmo ah ama wasmo ah ha sameyn ilaa labo toddobaad.
Waxaa jira halis yar oo ah in la seego uurka ama uu dhammeytirmi waayo waqtiga daaweynta. Haddii aad isku aragtid calaamado jeermis – oo ay ku jiraan heerkul sare iyo calaamadaha ifilo guud ama xummad fadlan sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah noola soo xiriir.
Waxaan furannahay 24 saac oo talo aan ku bixinno 0044 (0)845 300 8090 fadlan soo diyaarso afarta lambar ee lambarka furaha marka aad telefoon soo direyso.
Caadadaada ku soo xigta
Caadadaada ku soo xigta waxaa laga yaabaa in ay billaabato waqti kasta laga billaabo 4 ilaa 8 toddobaad. Waa in aad sameysid baaritaan uur saddex toddobaad daaweynta ka dib, si aad u hubisid in wax kasta ay guul ku dhammaadeen oo keliya. Waqtigaas ka hor ha sameyn maadaama hormoonka uurku uu weli ku sii jiri doono jidhkaaga lagana yaabo in natiijadu ay noqoto mid uurku uu jiro.
Naga soo wac +44 (0)845 300 80 90 haddii aad wax su’aalo ah qabtid ama aad jeceshahay in aad ballan dhigato.